Orinasa sy mpamatsy PANELOSY GROSITRA Sina China | Alucosun
Ny tontonana vita amin'ny vy tsy misy fangarony dia misy takelaka roa vita amin'ny sandwich vita amin'ny vy tsy misy fangarony avy ao anaty fitaovana thermoplastic izay natsangana tamina dingana mitohy tsy misy glu na adhesives eo anelanelan'ny zavatra tsy mitovy. Ny votoatiny dia ho afaka amin'ny banga sy / na habakabaka ary tsy ahitana akora fanamafisam-peo. Ny fatorana eo amin'ny atiny sy ny hoditra dia fatorana simika.
Q235B, Q345R, 20R ary vy vy hafa mahazatra ary vy manokana dia azo ampiasaina ho fitaovana fototra amin'ny takelaka vy mitafy vy. Ny akanjon'ny akanjo dia azo atao amin'ny vy 304, 316L, 1Cr13 ary duplex. Ny fitaovana sy ny hateviny dia azo atambatra malalaka mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpampiasa samihafa. Ny takelaka mitafy vy dia tsy vitan'ny fanoherana ny harafesin'ny vy tsy misy fangarony, fa manana tanjaka mekanika tsara sy fanatanterahana ny asan'ny gazy karbonika, izay vokatra indostrialy vaovao. Ny takelaka mitafy vy dia be mpampiasa amin'ny solika, indostrian'ny simika, indostrian'ny sira, fitehirizana rano ary indostrian'ny angovo herinaratra. Amin'ny maha vokatra fitsitsiana loharanon-karena azy, ny takelaka mitafy vy tsy metaly dia afaka mampihena ny fanjifana metaly sarobidy ary mampihena be ny vidin'ny tetikasa. Ny fitambarana tonga lafatra amin'ny vidiny ambany sy avo lenta dia misy tombony lehibe eo amin'ny fiaraha-monina.
(1) Flatness: SCP dia manana fisaka tena tsara azo avy amin'ny fizotran'ny laminaty mitohy.
(2) Hentitra: toy ny iray amin'ireo toetran'ny tontonana mitambatra, henjana sy maivana ny SCP. SCM 4mm dia mitovy amin'ny vy vy 2.9mm matevina amin'ny henjana, ary mampihena ny lanjany amin'ny 55%.
(3) fanoherana ny harafesina: NSSC 220M / # 316 / # 304, miaraka amin'ny atiny Mo, Nb, Ti, dia mahatohitra fanoherana harafesina tsy manam-paharoa.
(4) mahatohitra afo: Ny atiny dia mitovy atiny amin'ny BOLLIYA SCP, ary SCP dia manana fankatoavana amin'ny fampiasana ivelany sy anatiny any Shina ary nahatratra ny fenitra iraisam-pirenena toy ny BS / ASTM.
Ravina vy tsy haingon-trano
1000 * 2000mm, 1219 * 2438mm, 1219 * 3048mm, 1500mm namboarina namboarina
Famaranana azo tanterahina
No4. Volom-bolo, fitaratra, vita sokitra, PVDColor, Embossed, Vibration
Loko azo zahana
Volamena, Ross volamena, Champagne volamena, varahina, varahina, mainty, manga, volomparasy, maintso.
Previous: PANELANA HONEYCOMB ALUMINYUM
Manaraka: COIL COATED ALUMINUM
Panel mitambatra vy